Torapasik'i Puerto de Santa María: avy any La Puntilla mankany La Calita | News Travel
Louis Martinez | 29/04/2022 12:00 | España, tora-pasika
ny tora-pasika Puerto de Santa Maria Anisan'ny tsara indrindra any Espaina izy ireo. Tsy noho ny zava-drehetra dia tafiditra ao amin'ny sarobidy izy ireo Bay of Cadiz akaikin'ny San Fernando, Chiclana ny sisintany na Royal Port. Izy rehetra dia manana fasika volamena tsara miaraka amin'ny rano madio kristaly.
Raha atambatra dia enina ambin'ny folo kilometatra ny tora-pasika nandroan'ny Ranomasimbe Atlantika izay manome anao ny fampiononana sy ny tolotra rehetra. Raha ampiana izany rehetra izany ny toetr'andro amin'ny faritra, mahafinaritra foana sy miaraka masoandro maro, manana ny akora rehetra hankafizanao ny morontsirak'i Puerto de Santa María ianao. Mba hahafahanao misafidy izay tianao indrindra dia handeha hamaky azy ireo miaraka aminao izahay.
3 Santa Catalina, iray amin'ireo tora-pasika ao Puerto de Santa María tonga lafatra ho an'ny windsurfing
7 The Wall sy La Cove
8 Misy fotoana tsara hankafizana ny torapasik'i Puerto de Santa María ve?
9 Inona no hojerena any Puerto de Santa María?
Ny vaky rano avy amin'ny tora-pasika Puntilla
Voarafitra amin'ny vavan'ny Renirano Guadalete ary ny colora beach, dia efa ho sivinjato metatra ny lavany ary eo ho eo ny sakany dia sivypolo eo ho eo. Noho ny akaiky ny tanàna, dia tena malaza. Fa akaiky ihany koa ala kesika sy dongon'i San Antón, izay ahitanao toby.
Ary koa, ny toetrany amin'ny tora-pasika an-tanàn-dehibe dia midika fa manana ny serivisy rehetra izy. Misy ekipa mpanara-maso sy mpamonjy voina miaraka amin'ny sambo ary na dia ny fiara mpamonjy voina aza amin'ny faran'ny herinandro. Manolotra anao koa ny kabine sy ny douche, ny toerana fanaovana fanatanjahantena ary ny kitapo vonjy maika. Farany, nanamboatra ny fidirana ho an'ny olona manana fahasembanana ary seza manokana ho azy ireo handro.
Izy io dia eo akaikin'ny teo aloha, izay fantatra amin'ny anarana hoe Colorá. Noho izany dia eo anelanelany dantelina y port sherry, ny fanatanjahan-tena tsara tarehy sy ny fizahan-tany marina ao Puerto de Santa María. Afaka miditra amin'io faritra be fasika io ianao amin'ny alàlan'ny Avenida de la Libertad.
Efa ho valonjato metatra ny halavany ary efatra ambin'ny folo eo ho eo ny sakany. Toy izany koa, manolotra anao ny serivisy fidiovana sy fandroana rehetra. Ho liana koa ianao hahafantatra fa misy trano a toerana arkeolojika Archaic Lower Paleolithic. Raha te-hahita ireo sombiny hita ao ianao dia ho hitanao ao amin'ny mozea monisipaly avy any Puerto de Santa Maria.
Santa Catalina, iray amin'ireo tora-pasika ao Puerto de Santa María tonga lafatra windsurfing
Izy io, miaraka amin'ny an'i Levante sy Valdelagnara, izay horesahina any aoriana, ny tora-pasika lehibe indrindra amin'ny tanàna Andaloziana. Tokony ho telo arivo metatra ny lavany ary efapolo ny sakany. Fanampin'izany, misy tora-pasika kely maromaro ao anatiny. manokana ny an'ny Vistahermosa, Crab Mena, El Buzo, El Ancla ary Las Redes.
Izy io koa dia manana ny serivisy rehetra mety ilainao. Anisan’izany ny mpamonjy voina misy sambo sy tilikambo fiambenana, kitapo vonjy maika, trano fidiovana ary douche. Ny tora-pasika dia miendrika cordon ary afaka miditra ao ianao na avy amin'ny lalana Rota na avy amin'ny tanàn-dehibe ao amin'ny faritra.
Raha te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa somary mangatsiaka kokoa ny ranony noho ny an'ny morontsiraka sisa amin'ny Helodranon'i Cádiz. Fa ambonin'ny zavatra rehetra, raha tianao ny windsurfing na ny Kitesurf, Santa Catalina dia tonga lafatra ho anao ny fanazaran-tena na noho ny toetrandro sy ny onjan'ny.
Ny toetra mampiavaka ny tora-pasika Levante
Anisan'ireo morontsirak'i Puerto de Santa María, izany dia maneho ny fientanam-po voajanahary, satria ao afovoan'ny zaridainan'i Bahía de Cádiz no misy azy. Raha ny marina, dia manambatra faritra misy heniheny ao amin'ny ampahany amin'ny vavan'ny Reniranon'i San Pedro amin'ny dunes hafa.
Miaraka amin'ny efatra arivo metatra toradroa eo ho eo ny lavany ary efa ho zato amin'ny antsalany ny sakany, manana faritra kely voajanahary izy io. Izy io koa dia tonga lafatra amin'ny fanazaran-tena amin'ny rano toy ny surf. Amin'ny lafiny iray, raha ao amin'ny valan-javaboary voajanahary ianao dia tsy maintsy mandeha an-tongotra na bisikileta mankany amin'izany (misy toerana hametrahana azy ireo).
Toy izany koa, avy any amoron-dranomasina maromaro lalan-tongotra tahaka ilay manararaotra ny lalamby taloha avy any Jerez ka hatrany Trocadero, izay, raha ny marina, no voalohany tao Andalusia. maro fitsangantsanganana amin'ny toerana manan-tantara ao amin'ny faritra. Anisan'ireny ny salin'ny moyen Âge Ny Algaida, ny toerana misy ny tafik'i Napoleon nandritra ny Adin'ny Fahaleovantena na ny tonelin'ny orinasa vy Andaloziana taloha.
Farany, ny tora-pasika Levante dia manana sampan-draharaha momba ny fahasalamana, ny mpamonjy voina ary ny orana. Fa ny tena zava-dehibe, ny trano fidiovana dia namboarina ho an'ny olona manana fahasamihafan'ny fiasa.
Efa ho dimanjato metatra ny lavany ary efapolo eo ho eo ny sakany. Saingy manana faritra fialan-tsasatra dimy arivo metatra toradroa. Eo am-pototry ny hantsana no misy azy, eo anelanelan’ny Rota Naval Base ary ny tanàn-dehibe nitondra ny anarany.
Afaka miditra amin'izany ianao amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ny promenade ary mifanaraka amin'ny olona manana fahasamihafan'ny asa. Misy trano fidiovana sy douche ihany koa, mpamonjy voina, toerana hametrahana bisikileta ary eny fa na dia a tora-pasika bar. Izany rehetra izany dia mahatonga azy ho tena ankasitrahan'ny fizahan-tany nasionaly sy ireo tonga avy any ivelan'i Espaina.
Valdelagna, iray amin'ireo tora-pasika tsara indrindra any Puerto de Santa María
Eo anelanelan'ny vavan'ny Renirano Guadalete ary ny Levante beach, izay efa nolazainay taminao. Roa arivo metatra eo ho eo ny halavany ary fitopolo eo ho eo ny sakany. Miendrika akorandriaka izy io ary mamakivaky azy. Toerana fitsangantsanganana efa ho dimanjato metatra arivo izay, ankoatra ny fandehanana an-tongotra, dia afaka mankafy trano fisotroana sy trano fisakafoanana maro.
Na izany aza, misy ihany koa lalan'ny bisikileta izay mitondra anao amin'ny tontolon'ny faritra misy sira. Tena mety amin'ny fialan-tsasatra, fa koa amin'ny fanazaran-tena windsurfing ary ny Kitesurf. Izany koa dia ahafahanao mankafy ny fomba fijery mahafinaritra ny tanànan'i Cádiz.
Ho an'ny fialan-tsasatra dia tokony ho fantatrao fa misy hammocks sy elo hofaina. Izy io koa dia manana seza fandroana natao ho an'ny olona manana fahasamihafan'ny asa sy serivisy fiarovana ary fanofana sambo pedal. Afaka miditra amin'ny tora-pasika Valdelagnara ianao na an-tongotra na bisikileta na amin'ny lalana CA-32, raha mandeha fiara ianao.
The Wall sy La Cove
Ny tora-pasika manda
Atambatray ireo tora-pasika roa ireo satria ny sisa tavela amin'ny lapa Santa Catalina. Raha tia sary ianao, ankoatra ireo tora-pasika ireo dia ho azonao masoandro mody mahafinaritra.
Zara raha dimampolo sy telonjato metatra ny lavany ary dimampolo metatra ny sakany. Misy WC sy douche anefa izy io. Ankoatra izany, dia miavaka amin'ny maha iray amin'ireo tena arovana ny helodranon'i Cadiz manontolo. Afaka mandeha an-tongotra ianao amin'ny alàlan'ny Avenida de la Libertad na amin'ny bisikileta amin'ny lalan'ny bisikileta. Manana faritra hametrahana azy ireo mihitsy aza ianao.
Amin'ny lafiny iray, La Calita, izay eo amin'ny ilany ilany ny lapa, dia tokony ho dimanjato metatra ny lavany ary dimy ambin'ny folo metatra ny sakany. Na izany aza, ny fomba tsara indrindra hahatongavana amin'izany dia ny lalana avy any Puerto de Santa María mankany Rota. Tsy maintsy mivily midina ny arabe lehibe amin'ny Vistahermosa urbanization ary avy eo mivily miankavia. Toy ny teo aloha, dia manome anao kabine sy douche.
Etsy ankilany, mbola manana tora-pasika hafa ity faritry ny faritanin'i Cádiz ity. Momba ny amiral. Na izany aza, tsy ho afaka hankafy izany ianao, satria tafiditra ao anatin'ny toby Rota Naval voalaza etsy ambony.
Misy fotoana tsara hankafizana ny torapasik'i Puerto de Santa María ve?
Ny climatology amin'ity faritry ny Bay of Cadix tsara izany. Noho izany, afaka mankafy ny tora-pasika tsara tarehy saika mandritra ny taona ianao. Amin'ny ankapobeny, ny toetrandro dia subtropika-mediteraneana. Tena malefaka ny ririnina ary mafana ny fahavaratra, saingy tsy mafana loatra. Ity farany dia vokatry ny rivotra avy any amin’ny Oseana Atlantika.
Fa ambonin'ny zava-drehetra, ny faritra dia miavaka amin'ny ora maro be amin'ny masoandro: mihoatra ny telo arivo isan-taona. Araka izany, zara raha misy ny rotsak’orana (manodidina ny 400 mm). Aza adino fa ny faritra misy ny fiantraikan'i Cádiz dia antsoina Costa de la Luz.
Ho an'izay rehetra nohazavainay taminao, na ny faran'ny lohataona na ny fiandohan'ny fararano dia manan-kery hankafy ny morontsirak'i Puerto de Santa María. Fa ny fotoana tsara indrindra hanaovana izany dia ny fahavaratra. Io ihany koa no fotoana hifanojoanao amin'ireo mpizahatany maro kokoa, na dia tsy hitsahatra hankafy ireo tora-pasika mahafinaritra ireo aza ianao noho izany.
Inona no hojerena any Puerto de Santa María?
Castillo de San Marcos, iray amin'ireo tsangambato lehibe ao Puerto de Santa María
Tsy afaka mamita ity fitsidihan'ny tora-pasika amin'ity faritr'i Cadiz ity izahay raha tsy manonona ny sasany amin'ireo tsangambato azonao tsidihana any. Ny roa dia nisongadina be tao Puerto de Santa María. Izany no manaitra San Marcos Castle, tempoly voaro mafy naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo amin'ny moske arabo tranainy iray sy ny Fiangonana Priory lehibe, naorina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, na dia naorina tamin'ny taona faha-XNUMX aza (noho izany ny singa baroque tsy azo iadian-kevitra).
Saingy afaka mitsidika tsangambato ara-pivavahana sy sivily hafa ao amin'ny tanànan'i Cadiz ianao. Anisan'ny voalohany, ny monastera fandresena, ny tranon'ny Fanahy Masina sy ny Conception Immaculate na ny hermitage an'i Santa Clara. Ary, raha ny segondra, ny trano Vizarron, ny lapan'i Araníbar, Chargers to the Indies ary Álvarez-Cuevas na Lonja del Puerto Taloha.
Ho fehiny, nanolotra anao ny tsara indrindra izahay tora-pasika Puerto de Santa Maria. Izy rehetra dia mahafinaritra ary manana ny ankamaroan'ny serivisy. Fa araraoty ny fitsidihanao ny tanànan'i Cadiz mba hankafizana ihany koa ny tsangambato. Tsy te-hahafantatra an'io faritra manan-tombon'i Espaina io ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Torapasik'i Puerto de Santa Maria